I-Arctic ibone unyaka wayo ofudumele emlandweni orekhodiwe | Isimo Sezulu Senethiwekhi
I-Arctic ibe nonyaka wayo ofudumele kakhulu emlandweni oqoshiwe
Iplanethi iyafudumala, kepha hhayi yonke indawo ngokulinganayo. E-Arctic isimo simanzonzo. Ubufakazi balokhu ngumbiko oshicilelwe yi-NOAA emhlanganweni waminyaka yonke we-American Geophysical Union obuseSan Francisco.
Bangu-61 ososayensi abavela ezizweni eziyi-11 abaphothule lo msebenzi obanzi, owethulwa ngezithombe namamephu akhombisa ubuqiniso obucacile be-Arctic.
1 Ithempelesha e-Arctic: ukukhuphuka ngokushesha okukhulu ngesilinganiso
2 Ukukhula okukhulayo kwezimila ze-arctic
Ithempelesha e-Arctic: ukukhuphuka ngokushesha okukhulu ngesilinganiso
Isithombe - NOAA
E-Arctic izinga lokushisa liyanda, futhi kakhulu. Emfanekisweni ongenhla ungabona lokho kube nokukhuphuka kwama-degree angaphezulu nje kwe-2, ngenkathi emhlabeni wonke izinga lokushisa elijwayelekile lingu-1,31ºC. Ama-degree amabili angahle angabonakali njengokuningi, kepha kungaba umehluko phakathi kokuba nezwe eligcwele iqhwa cishe unyaka wonke, uma kucatshangelwa indawo okuyobe kunengqondo kakhulu, noma izitshalo.
EGreenland ukulahleka kweqhwa kuyamangaza kakhulu:
Cishe ama-gigaton angu-3000 eqhwa alahlekile kulo nyaka. Iqhwa elincibilikile, okuyilo, eligcina olwandle, lenze izinga lalo likhuphuke, lifaka engcupheni izimpilo zabo bonke abahlala ogwini noma eziqhingini eziphansi.
Ukukhula okukhulayo kwezimila ze-arctic
Lapho izinga lokushisa likhuphuka futhi neqhwa liyancibilika, kulindeleke ukuthi kube nokukhula okwengeziwe kuhlaza. E-Arctic, izimo ezifanele ziyaqala ukuze izitshalo zikhule, njengoba ubona esithombeni ngenhla.
Kungaba kuhle, kepha akujwayelekile. Njengoba izinga lokushisa landa, kunezilwane eziningi ezinezinkinga eziningi zokondla, njengamabhere we-polar, asengozini yokuqothulwa.
Uma ufuna ukufunda isifundo ngokugcwele, chofoza lapha (KungesiNgisi).
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » I-Arctic ibe nonyaka wayo ofudumele kakhulu emlandweni oqoshiwe